Arday ka soo baxday dugsiyada sare oo loo qabtay siminaar ku saabsan doorashada kuliyadaha jaamacadaha dalka” SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Arday ka soo baxday dugsiyada sare oo loo qabtay siminaar ku saabsan doorashada kuliyadaha jaamacadaha dalka” SAWIRRO”
Siminaarkani oo lagu baranayay casharro laxiriira sida ay ardaydu ku dooran karaan daraasaadka sare ee jaamacadaha gaar ahaan kuliyadaha ayaa loogu qabtay magaalada muqdisho ilaa 100 arday oo ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka.
Tababarkani oo ay soo qaban qaabiyeen urur dhallinyaro oo lagu magacaabo Himilo iyo Jaamacadda Zamazam ayaa waxaa casharro waxaa ka bixinayay macallimiin qibrad iyo aqoon durugsan u leh la talinta xagga waxbarshada waxaana kamid ahaa mas’uuliyiinta maamulaha isbitaalka Ordugaan Ex. Dikfeer Dr.xuseen , Guddoomiyaha Ururka Himilo C/raxiim warsame diriye, Guddoomiyaha jaamacadda zamzam Dr.fikrad
Dhammaan waxay aad ugu dheeraadeen muhimadda ardeyda iyo marxaladda cusub ay galayaan iyo jaamcadda zamzam inay waxbarasho tayo leh ay siin doonto ardeyda ayna iska kaashan doonaan isbitaalka iyo jaamacaddda sidii ardeyda baranaya kuliyadaha medicine-ka xarunta kuliyaddana ay noqon doonto isbitaalka weyn ee digfeer oo qlab casri ah uu yaalo oo kaafin doona wax walba oo agab ah.
Intabadan marka ardaydu ay soo dhameystaan dugsiyada sare ayaa ku adag in si fudud ay ku doortaan kuliyadaha jaamacadaha ay bixiyan.
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida oo maanta xukunno ku ridday ee deysanayaal”SAWIRRO”